La fal galka ururrada argagixiska oo la soo jeediyey in la xaaraantimeeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Morgan Johansson (S), wasiirka cadaaladda oo xarunta madaxtooyada ku soo ban-dhigay qorshe lagu xaaraantimeeynayo la fal-galka ururrada argagixisada. sawir: Vilhelm Stokstad/TT
La fal galka ururrada argagixiska oo la soo jeediyey in la xaaraantimeeyo
La cusbooneeyay fredag 15 december 2017 kl 14.35
La daabacay fredag 15 december 2017 kl 12.39
Baaraha dawladda ayaa soo jeediyay in la xaaraantimeeyo ka qeyb qaadashada howlaha ururrada argagixisada.
Cidda lagu tuhumo falalka noocaasi ah ayaa lagu ridi doonaa ciqaab xukun iyada oo aanay ku caddeeyn dembi gaar ah.
–Waa wakhtigii loo baahnaa in xeer noocan ah lagu biiriyo xeerarka Sweden, sida uu sheegay wasiirka cadaaladda Morgan Johansson (S).
Fikirk-xeereedkan ayaa lagu soo ban-dhigey 11-kii subax-nimo maanta oo jimce ah xarunta madaxtooyada Sweden ee Rosenbad. Shir jaraa’id ee goobtaa lagu qabtay ayey goob joog ka ahaayeen baare Stefan Johansson iyo wasiirka cadaaladda Morgan Johansson (S).
Dawladda ayaa u xil-saartay inuu baaruhu ka soo baaraan-dego in la maxkamadeeyn karo ciiddii qayb ka noqota ama hab kale u taageerta urur argagax. Iyadoona iminka la soo jeediyey in la xaaraantimeeyo xubin-nimada iyo la fal-galka ururada noocaasi ah.
Fikirka xeerkan ka dambeeya wuxuu yahay in shakhsi lagu ridi karo gacan ka geeysad ururrada xag-jirka iyadoo aanu xeer-ilaaliyuhu u baahan inuu caddeeyo fikirka ka dambeeya ee ah in lagu talo jiray in dembi la galo ama horay loo galay.
–Maanta ayaan dembi loo arag in laga qeyb qaato howlaha tusaale ahaan ururka Daacish (IS), sida uu sheegay baare Stefan Johansson.
Xeerka ayaa loo isticmaali doonaa dadyoowga u haya war-bixin, hagid ama qoraallo urur argagixis. Ciqaabta ayaa la soo jeediyey inay noqoto ugu badnaan laba sannadood oo xabsi ah iyo lix sannadood haddii falku yahay mid culus.
Stefan Johansson, baaraha dawladda ayaa carrabka ku adkeeyay in aanay ku filleeyn oo keliya in lagu sugnaado goob uu tusaale ahaan ka howl-galo ururka Daacish. Dhanka kale way ka sahlanaanaysa in xeerka la hor-geeyo dadyoowga u socdaala Ciraaq iyo Suuriya sidii ey siyaabo kala duwan gacan ugu siin lahaayeen ururka Daacish (IS).
Xeerka noocan oo kale ah ayaa dalkan horay looga qabay tuhun ballaaran maadaama uu wax-yeeleenayo xorriyad ballaaran ee ururradu ku naaloodaan.
Hase yeeshee uu baaruhu kaga gudbay xeeyn-daabkaa inuu ku macneeyo ururrada argagixisada kooxo dad ah ee isku tagey, kuwaasina oo isku daya, gacan ka geeysta ama gala falal argagixis-nimo.
Xeer dhiggiisa ah ayaa ka howl-gala dalka Noorway laga bilaabo sannadkii 2013. Midkaasina oo hor-seeday in illaa hadda sagaal ruux ciqaab lagu ridey, soddomeeyo kalena lagu tuhun-san yahay iney xeerka jebiyeen. Dhowaantan ayay ahayd kolkii laba ruux lagu ridey xukun qiyaastii afar sannadood ah, kuwaasina oo lagu eedeeyey iney kooxo ka tir-san ciidanka Daacish u kala waarideen carriga Bariga Dhexe.
Hase yeeshee dalka Noorway lama qeexin waxa loola jeedo urur argagax.
Xeerkan ayaa sidoo kale xaaraantimeeynaya in lala fal galo urur argagax, middaasina looga gol leeyahey haddii la dooneyo in lagu macaasho xiriirka ururka argagixisada. Tusaale ahaan in dhisme la iibiyo. Falalka noocaasi ah ayaa maantaba la isku maxkamadeeyn karaa iyada oo la tiigsaneyo xeerka maal-gelinta argagixisada.
Sidoo kale waxaa maantaba uu xeer ka jiraa in la isku dhiiri-geliyo, in la miisaaniyad geliyo, in loo ololeeyo ku biirista iyo in laga qeyb qaato tababarrada argagixisada.
Baaruhu wuxuu soo jeedinayaa xaaraantimeeynta, u ololeeynta, maal-gelinta iyo ka qeyb galka ururrada argagixis.
Wasiirka cadaaladda Morgan Johansson (S) ayaa ammaanay fikirrada xeerka.
–Waa fikir xeereed ka xoog badan oo daboolaya baahi ka ballaaran xeerarka maanta noo deg-san, sida uu sheegay.
Wasiirka ayaa aamin-san in la gaaray wakhtigii uu dalku yeelan lahaa xeerar u dhigma kuwa ka jira waddammada Yurub.
In aan horay loo hir gelin xeer noocani ah ayuu ku macneeyay Morgan Johansson Sweden oo aanay la soo gudboonaan falal argagixis ee dalka gudihiisa ka dhacay, sida waddamo badan ee Yurub la soo gudboonaatay.
Su’aasha ah in ka qayb qaadashada ururka cunsuriga ee NMR uu xaaraantimeeynayo xeerka noocan ah, ayuu wasiirku sheegay inay ku xiran tahay dhabbada ey ururrada noocan ihi raacaan mustaqbalka. Wuxuuna farta ku fiiqay inuu xeerkani qaban lahaa ururrada IRA, ETA, Röda brigaderna iyo Baader-Meinhof.
Baarista loo saarey xeerkan ayaa ka dambeeysay dhacdadii falka argagixis-nimo ee bishii abriil 7-deedii 2017 ka dhacday waddada Drottninggatan ee magaalada Stockholm.
Ma loo baahan yahay xeerka noocan ah.